आइतबार कहाँ कति संक्रमित भेटिए ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
आइतबार कहाँ कति संक्रमित भेटिए ? (सूचीसहित)
काठमाडौंः नेपालमा थप ८३० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा ५१८१ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
योसँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ४८ हजार ४२३ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइतबार १५ सय जना निको भए । योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ३५ हजार ७३१ पुगेको छ । हाल संक्रमित संक्रमित संख्या १० हजार ९९४ छ ।
याे पनि पढ्नुस आज २९३३ जनामा कोरोना, एकै दिन २४ संक्रमितको निधन
सोमबार थप ९ जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ६९८ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इलाममा २, झापामा २०, ताप्लेजुङमा २, तेह्रथुममा ३, धनकुटामा १, पाँचथरमा १, भोजपुरमा २, मोरङमा ३८, संखुवासभामा २, सोलुखुम्बुमा १ र सुनसरीमा १० जना ।
धुनषामा १, महोत्तरीमा १, रौतहटमा १ र सप्तरीमा १ जना ।
याे पनि पढ्नुस नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुग्यो
काठमाडौंमा २५८, काभ्रेमा १, चितवनमा १९, धादिङमा ५, नुवाकोटमा ६, भक्तपुरमा २५, मकवानपुरमा ५, रसुवामा ५, रोमछापमा ३, ललितपुरमा ६५ र सिन्धुपाल्चोकमा १ जना ।
कास्कीमा ५३, गोरखामा ३, तनहुँमा १३, नवलपरासी पूर्वमा ७, पर्वतमा ३, म्याग्दीमा १, लमजुङमा ९, बागलुङमा ६ र स्याङजामा ५ जना ।
अर्घाखाँचीमा ४, कपिलवस्तुमा १, गुल्मीमा ३, दाङमा १६, पाल्पामा ९, प्यूठानमा १, बर्दियामा १, बाँकेमा ७, रुकुम पूर्वमा १, रोल्पामा १ र रुपन्देहीमा २३ जना ।
याे पनि पढ्नुस प्रदेश सांसद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
कालिकोटमा २, दैलेखमा ६, रुकुम पश्चिममा ८, सल्यानमा ६ र सुर्खेतमा १८ जना ।
अछाममा १५, कञ्चनपुरमा ४१, कैलालीमा ६२, डडेल्धुरामा १, डोटीमा १४, दार्चुलामा १, बझाङमा ९ र बैतडीमा १ जना ।